नेकपा विभाजन हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सचिवालयका केही सदस्यसहित आफू निकट नेताहरुसँग खुमलटारमा छलफल गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो चेतावनी आएको बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक पनि बोलाउदिनँ, तपाईंहरुले जुनसुकै कमिटीको बैठक बोलाएर बुहमतले निर्णय गरे पनि त्यसलाई मान्दिनँ । कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो कदम म चाल्छु । एकै ठाँउ बस्न सकिन्नँ भने अलग-अलग जाऔँ । मलाई कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ,’ दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै खुमलटार छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन हुन सक्ने संकेत र चेतावनी दुवै दिनुभएको छ ।’
दाहालको ब्रिफिङ सुनेपछि जवाफमा नेताहरुले अहिले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्न नहुने र बैठक राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ती नेताका अनुसार जो कोहीले पार्टी निर्णय मान्नपर्ने, पार्टीलाई नीति र विचारका आधारमा तथा विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने खुमलटार छलफलको निष्कर्ष थियो ।
यसबाहेक सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर काम केन्द्रित गर्ने, पार्टी महाधिवेशन गर्ने र चुनावी तयारीमा लाग्नु नै अहिलेको विकल्प भएको नेताहरुको भनाई थियो । खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरुले दाहाललाई ओलीसँग पुन: संवाद गर्न र एक्लै भेट नभए सामूहिकरुपमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि आइतवार दिउँसो नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि पार्टी एकता संकटमा परेको जानकारी दिएका थिए । ‘यतिबेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । आपसी अन्तरविरोधलाई सहमतिका साथ समाधान गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न समस्त नेता तथा सदस्यहरु समक्ष अनुरोध गर्दछुु’ महासचिव पौडेलको ट्वीटमा छ ।
केही दिन अगाडि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मा पाएका महासचिव पौडेलले आइतबार दिउँसो ट्वीटमार्फत एकताका लागि योगदन गर्नसमेत सबैसँग आग्रह गरेका हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:२१
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण मिति सरेको सर्‍यै
काम सक्नुपर्ने समयमा पुन: सम्झौताको तयारी
कार्तिक १६, २०७७ ज्योति कटुवाल
दैलेख — पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच गरिएको सम्झौता संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
अन्वेषणका लागि दुवै देशबीच भएको सम्झौताअनुसार कामले गति नलिएपछि अन्वेषणको मिति सरेको सर्‍यै गरेको हो ।
अन्वेषणका लागि पहिलोपल्ट सन् २०१७ र दोस्रोपटक २०१९ मा सम्झौता भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले सेस्मिक सर्भेको स्थलगत अध्ययनको नतिजा कुरिरहेका जनाएको छ । नतिजा कुर्दाकुर्दा विभागले झन्डै १ वर्षको समय खेर फालेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलबहादुर विकले बताए । ‘सम्झौता गर्न र म्याद थप्नमै सरकार तल्लिन छ,’ उनले भने, ‘नतिजा देखिनेगरी काम कहिल्यै भएन ।’
चिनियाँ प्राविधिक टोलीको अध्ययनको नतिजा नआउँदा र लकडाउनका कारण काम नभएको देखाउँदै विभागले अन्वेषणको काम २०२० मा नगर्ने जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण धेरै काम हुन नसकेको भन्दै विभागले २०२१ को जनवरीबाट अन्वेषण सुचारु गर्ने जनाएको हो । २०१९ फेुबुअरीमा सम्झौता गरी २०२२ भित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने विभागको लक्ष्य थियो ।
२ वर्षसम्म सोचेअनुसारको काम नभएपछि सम्झौता संशोधन गर्ने तयारी थालिएको विभागका अन्वेषण अधिकृत डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । ‘अब पनि कोभिडले कहिलेसम्म पछाडि धकेल्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर २०२१ को सुरुदेखि नै काम सुचारु गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ सर्भेको काम सकिनबित्तिकै कोरोनाले असर गरेको उनले बताए ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीको नतिजाका आधारमा दोस्रो चरणको ड्रिलिङको काम गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सेस्मिक सर्भेको विश्लेषण र अन्वेषण रिपोर्टको आधामारमा ड्रिलिङ गरिनेछ । चिनियाँ टोलीसँग गरिएको ३ चरणको सम्झौताअनुसार पहिलो स्थलगत अध्ययनको नतिजा नै समयमा उपलव्ध नभएको डा. त्रिपाठीले बताए ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ शिरस्थानमा सयौं वर्षदेखि बलिरहेको ज्वाला । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:१७